२१९० को सपोर्ट तोड्दै नेप्से ५० अंकले घट्यो, के भन्छ प्राविधिक विश्लेषणले ? - Laltin Media
Home»सेयर बजार»२१९० को सपोर्ट तोड्दै नेप्से ५० अंकले घट्यो, के भन्छ प्राविधिक विश्लेषणले ?
२१९० को सपोर्ट तोड्दै नेप्से ५० अंकले घट्यो, के भन्छ प्राविधिक विश्लेषणले ?
By लाल्टिन डट कम May 30, 2022 Updated: May 30, 2022 No Comments3 Mins Read
आज सोमबार ५०.३३ अंकले घटेर २.२६% गिरावटको साथ नेप्से परिसूचक २१७३.४४ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २२७ कम्पनीमध्ये ५ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १८७ कम्पनी ओरालो लागेका छन् भने २ कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
बजार पुँजीकरण घटेर ३० खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: May 30, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर मात्र १ अंकले बढेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः२२२) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी थोरै मात्रै बढेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २१७३.४४ मा बन्द भएको छ। आज बजारमा बिक्री धेरै बढेको देखिन्छ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन घटेर जिरो लाइन भन्दा तल -५५.४७ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम घटेर पोजेटिभ ०.३४ मा आएको छ। एमएसिडी लाइनले तलबाट माथि घुमेर सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर माथि जान लागेको थियो तर आज केही तल फर्केको देखिन्छ। सिग्नल लाइन बढेर जिरो लाइन भन्दा तल -५५.८१ मा आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज बिक्रीको मोमेन्टम ज्यादै बढेको र खरिद घटेको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरका अनुसार आज +१४ डिएमआई लाइन केही तल फर्किएको छ र -१४ डिएमआई लाइन माथितिर फर्किएको छ। सिग्नल लाइन आज माथितर्फ बढ्न थालेको देखिन्छ। +१४डीएमआई लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर तल गईरहेको छ। आज – १४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ जसले बजारमा बिक्री धेरै बढेको जनाउँछ।
आज नेप्सेले बियरिश क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा बिक्री धेरै बढेको सङ्केत गर्छ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -५१७१ देखि घटेर -५३५३ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम २९४५६१४ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(२९०७३६८) को १०१ प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड भन्दा थोरै माथि २१७३.४४ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -५५.४७ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन भन्दा तल -५५.८१ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम हिजोभन्दा घटेर ०.३४ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्रीकर्ता हावी भएको देखाउँछ।
+१४ डिएमआई लाइन केही तल फर्किएको छ र -१४ डिएमआई लाइन माथितिर फर्किएको छ। सिग्नल लाइन आज माथितर्फ बढ्न थालेको देखिन्छ। +१४डीएमआई लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर तल गईरहेको छ। आज – १४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ जसले बजारमा बिक्री धेरै बढेको जनाउँछ। आज आरएसआइ ३७.४१ बाट घटेर ३२.६९ मा पुगेको छ जसले आरएसआइको मोमेन्टम घटेको र बजार पुन: ओभर सोल्ड जोनमा पुगेको जनाउँछ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट २०२० को एरिया देखिन्छ भने नेप्सेको नजिकको अवरोध २२३० को एरिया रहेको देखिन्छ।#nepsetech